Karting – “3è Grand prix”: hiady ny ho lohany i Tommi sy i Haja | NewsMada
Karting – “3è Grand prix”: hiady ny ho lohany i Tommi sy i Haja
Par Taratra sur 27/09/2018
Hiditra amin’ny dingana fahatelo ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja karting. Hafana vay ny fihaonana satria miisa roa ny mpanamory mitovy isa, hiady ny lohany, amin’ity.
Hotanterahina, eny amin’ny “circuit Imerintsiatosika”, ny alahady 30 septambra ho avy izao, ny “3è grand prix”, eo amin’ny karting. Dingana mialoha ny farany, eo amin’ny fifaninanam-pirenena. Hanana ny lanjany ity dingana fahatelo ity satria mety hamaritra izay ho tompondakan’i Madagasikara. Hiady izany, ho an’ny sokajy “Max Evo”, Rakotomalala Haja sy Rajoelison Tommi. Samy manana isa 180 izy mirahalahy ireo, hatreto. “Efa niomana amin’ny saina sy sy ny vatana ny tenako. Mila mailo satria goavana sy mahay i Haja, mpifanandrina mahay. Hiezaka ny hitazona ny anaram-boninahitra efa azo tamin’ny taon-dasa”, hoy i Tommi.
Hizara dimy ny fifaninanana ka hisantatra izany ny andrana tsotra sy ny andrana fakana fotoana. Aorian’ireo vao hiatrika ny dingana voalohany ireo mpifaninana rehetra, arahin’ny famaranana mialoha ny fotoana, ary faranana amin’ny famaranana. Tsy hisy ny fanatambarana isa fa izay voalohany no hisalotra ny anaram-boninahitra.
Handeha mivantana amin’ny TVM
Hampiavaka ity “3è grand prix” ity ny fandefasana mivantana ny fifaninanana amin’ny fahitalavi-pirenena. Nambaran’i Mamikely, komisiona mpikarakara ny karting, fa tanjona ny hitomboan’ny mpanamory karting, efa misy eo amin’ny 50 ireo manana kara-pilalaovana ankehitriny, amin’ny sokajy rehetra manomboka amin’ny “minime” ka hatramin’ny “elite”. “Ezahina ny hampitombo ny hisian’ny dingana hifaninanana, amin’ny taona 2019. Ankoatra izay, miandry ny valin-tenin-dry zareo Reonioney sisa ny federasiona sport automobile malagasy ny amin’ny hanatanterahana ny fifaninanana iraisan’ny Nosy, eo amin’ny karting”, hoy Rakotofiringa Jimmy, filohan’ny FSAM.
Mandra-piandry izany, mitarika eo amin’ny sokajy “sénior” i Laval Lam, manana isa 180. Rabary Mahary kosa ny lohany eo amin’ny “cadet” raha Ranarison Randy ny ho an’ny “minime”.